Yintoni amava omsebenzisi kwaye wenza ntoni umyili we-UX? Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yintoni amava omsebenzisi kwaye wenza ntoni umyili we-UX
Encarni Arcoya | 04/09/2021 13:00 | Ezahlukeneyo
Wakhe weva ngamava omsebenzisi? Mhlawumbi uvela kuyilo lwe-UX? Ziingcinga ezimbini ekufuneka ucace gca kuzo kuba ziyanda kwaye kunokwenzeka ukuba kwikamva elingekude kakhulu babeyinto ekhethekileyo efunekayo kakhulu.
Kodwa, Yintoni amava omsebenzisi? Yintoni uyilo lwe-UX? Ukuba awuyazi into esithetha ngayo, siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi.
1 Yintoni uyilo lwe-UX kwaye inantoni yokwenza namava omsebenzisi
2 Uyintoni umyili we-UX
2.1 Izakhono zoyilo ze-UX
3 Yintoni amava omsebenzisi
Yintoni uyilo lwe-UX kwaye inantoni yokwenza namava omsebenzisi
Okokuqala, siza kuqala ngoyilo lwe-UX, kuba ukuba awuyiqondi le nto, ezinye zinokuba nzima ngakumbi ukuziqonda. Uyilo lwe-UX, ekwabizwa ngokuba luyilo lwamava omsebenzisi, ayisiyonto ngaphandle kothotho iinkqubo ezenziwa ngenjongo yokudala iimveliso ezanelisa abasebenzisi, ngelixa bebonelela ngamava afanelekileyo, kwaye ngokusekwe kulwazi abanalo.
Ngamanye amagama, yinkqubo eyenziweyo ukulandela ukuze bakwazi ukusombulula iimfuno zabasebenzisi. Umzekelo, cinga ngemop. Ngomhla wakhe, xa yayidalwa, umntu owayiqambayo, uManuel Jalón, sicinga ukuba wayecinga ngala manina kwakufuneka aguqe ngamadolo akhe ajike ilaphu ukuze akwazi ukukhuhla imigangatho, kwaye wayefuna ukunceda wenze lo msebenzi uthwale ngakumbi. Oko kukuthi, bajonge imveliso eza kusombulula isidingo sabaphulaphuli kwaye, ukongeza, yenza yonke into ibe lula kubo.
Ngaba uyayiqonda ngoku ukuba luyintoni uyilo lwe-UX?
Ngemizekelo yangoku sinezithethi ezikrelekrele, iifowuni eziphathwayo, njl. Zizinto eziyilelwe ngokusekwe kubasebenzisi kunye nosetyenziso abaza kubanika lona. Kwimeko yeeselfowuni, ekuqaleni iscreen besincinci kuba besisetyenziselwa ukubiza kuphela, kodwa ngoku ukubiza yeyona nto incinci, izikrini zinkulu ukuphucula ukukhangela kunye nokukwazi ukuthumela imiyalezo.
Uyintoni umyili we-UX
Kuba siyayazi uyilo lwe-UX, into elandelayo ekufuneka uyiqonde yile nto uyilo lwe-UX kwaye kutheni le nto inxulumene namava omsebenzisi. Kwaye kule meko sithetha ngomntu onoxanduva fumana isisombululo kwingxaki esekwe kwiimfuno zabaphulaphuli ekujoliswe kubo. Oko kukuthi, kuyakwenza imveliso iluncedo ngokwaneleyo ukuba loo mntu aphendule kwiimfuno zabo.
Kwakhona, sikunika umzekelo: Khawufane ucinge ukuba unecala leselula. Ubeke indawo yamakhadi, ityala elilingana neselfowuni ... Ukuza kuthi ga ngoku kulungile. Kodwa kuthekani ukuba imeko iya kuvuleka ukusuka ekhohlo ukuya ekunene kwaye hayi ngasekunene? Kule meko, ukuba abantu ekujoliswe kubo ngabantu abangamanxele, uya kuba ukuphucule ukusebenziseka kwabo, kodwa kuthekani ukuba abekho njalo? Kwabanikezeli basekunene le inshorensi ayinakonwaba, kwaye, ke, baya kugqibela ngokungayisebenzisi.
Umyili we-UX uzinikele kuloo nto, ukuyila amava omsebenzisi ngeyona ndlela ifanelekileyo yokuqinisekisa ukuba wanelisekile yimveliso okanye ngenkonzo (kwaye uya kuyiphinda kwimeko ayifunayo).
Izakhono zoyilo ze-UX
Ukuze ube yingcali kuyilo lwe-UX, okanye amava omsebenzisi, kufuneka ubenezakhono ezithile ekungekho kubo bonke abantu. Kodwa ukuba ufuna ngokwenene, uya kudinga:
Uvelwano. Kuya kufuneka uzifake ezicathulweni zabanye abantu ukuze ufumane ukuba yintoni abanokuyidinga kwaye ubanikeze ngemveliso ehlangabezana ngokwenene nezi mfuno.
Ukujonga. Ngamanye amaxesha, akwanele ukuzibeka endaweni yomnye, kodwa kuya kufuneka ujonge, ubone ukuba yintoni emhluphayo okanye zeziphi iinkcukacha akunike zona ngendlela yakhe yokwenza engakuxeleliyo ngomlomo. Kungenxa yokuba ezo zinto inokuba zezizo ezenza imveliso yakho ilungele lowo msebenzisi.
NoNxibelelwano. Kubaluleke kakhulu, kuba kufuneka ubeke ubudlelwane obuhle kunye nabasebenzisi, kodwa kunye neqela lonke. Kwelinye icala, kuya kufuneka uyazi indlela yokubonisa yonke into ofuna ukuba loo mveliso ibe nayo kuba, ngaphambili, umvile loo msebenzisi ukuba akuxelele malunga neengxaki abanazo xa besebenzisa into.
Ukuba ngumyili we-UX akukho lula, kwaye akukho lula nokusebenza kumava omsebenzisi. Nangona kunjalo, ngumsebenzi oqhubeka usaziwa kwaye unceda abanye ukuba bafumane iimveliso eziya ziqhelana ngakumbi nezinto abazifunayo.
Kuya kufuneka uyazi ukuba, ngaphakathi kuyilo lwamava omsebenzisi kukho ubuchwephesha obahlukeneyo. Ayizizo zonke ezizinikezelwe kuwo onke amanqanaba enkqubo, kodwa zigxile kwinqanaba elithile. Njengokuba:
Umbhali we-UX. Yeyona inikezelwe ekuchazeni ukuba umntu uza kunxibelelana njani nomsebenzisi. Ukwenza oku, ufunda ulwimi lwabo kwaye alungelelanise imveliso ukuze idibane nomthengi.
Amava omphandi. Waziwa ngcono njengoMphandi we-UX, ngoyena mntu uza kuhlalutya abasebenzisi ukuze baqonde ukuba zithini iimfuno zabo.
Uyilo lweNkonzo. Yenye efuna ukuphucula iimveliso okanye iinkonzo ukuze zihlaziywe kwaye zibe luncedo ngakumbi kwaye zisebenze ngokufanelekileyo.
Yintoni amava omsebenzisi
Ngoku sele ukubonile konke oku kungasentla, sele uyazi ukuba i-UX ngamava omsebenzisi. Kwaye unganakho ukufumana umbono wento ekubhekiswa kuyo. Kwaye kukuba amava omsebenzisi yi umsebenzi ofuna ukuphucula imveliso okanye inkonzo ukuze kuzuze umsebenzisi. Oko kukuthi, kuyafunwa ukuba le mveliso okanye inkonzo iphendula kwiimfuno zomthengi ukuze afune ukuyisebenzisa okanye ayisebenzise (kwaye ayiphinde).
Olu luvo lubaluleke ngakumbi, kwaye lunokusetyenziswa kumacandelo amaninzi, kokubini kwi-eCommerce nakoyilo lwegraphic. Umzekelo, cinga ukuba kuya kufuneka uyile ibhayisekile. Ngokucacileyo, uyilo luya kufana kuzo zonke iibhayisikile, kodwa kuya kufuneka wazi apho ubeka khona zonke izinto ukuze nawuphi na umkhweli webhayisikile azive ekhululekile ukuyisebenzisa. Oko kuthetha ukuba uyazi apho i-pedals, i-handlebars, isali, nkqu nomgcini webhotile yamanzi aya kuhamba ngcono.
Ngaba amava omsebenzisi kunye nomsebenzi womyili we-UX ucacile kuwe ngoku?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Yintoni amava omsebenzisi kwaye wenza ntoni umyili we-UX
Uyenza njani iincwadana zencwadi kwi-Intanethi